Ny ekipanay - AfricaArXiv
Ireo mpikambana ao amin'ny ekipa AfricaArXiv dia matihanina izay manana fiaviana sy fahaiza-manao isan-karazany amin'ny sehatra samihafa mifandraika amin'ny fampianarana ambony sy fikarohana any Afrika.
Te-hiditra amin'ny ekipan'ny AfricaArXiv ve ianao? Mifandraisa aminay ary ampahafantaro anay ny fomba ahafahanao mandray anjara.
Raha fangatahana amin'ny ankapobeny dia azafady e-mail info@africarxiv.org.
University University of Kenya [ORCiD]
Injeniera rindrambaiko sy mpikaroka amin'ny teknolojia andiany manaraka, anisan'izany ny zava-misy mifangaro virtoaly sy mitombo, sehatra blockchain, ary sensor manara-penitra mavesatra maivana.
University of Ibadan, Nizeria, [ORCiD]
Oniversite Khartoum, Sudan [ORCiD]
Mpianatra ny fanafody, mpikaroka, mpandraharaha ary mpisolo vava ho an'ny fisokafan'ny fikarohana, angon-drakitra ary fampianarana. Mahaliana amin'ny fananganana kolontsaina fikarohana misokatra any Afrika miaraka amin'ny finoana matanjaka amin'ny fahasamihafana sy ny fidirana. Mpanorina ny Open Sudan, hetsika fandraisana andraikitra misokatra ho an'ny firenena. Izy koa dia eo amin'ny komity mpanatanteraka ny SPARC Africa, mpanolotsaina ho an'ny Misokatra ny Sarintany Fahalalana ary amin'ny birao mpitantana FORCE11.
Ivontoerana fikarohana momba ny fitsaboana momba ny Genetika sy Génior (GRMCR) ao amin'ny University Putra Malaysia (UPM) sy ny Institut Genie Malgache (MGI)ORCiD]
Mpianatra PhD ao amin'ny Human Genetics miasa amin'ny fikarohana fototra sy fandikan-teny amin'ny famolavolana fitsaboana kendrena ho an'ny homamiadan'ny voan'ny tazo izay mampiasa teknolojia fandefasana avo lenta.
Vatsim-pianarana nomerika afrikanina, Research Associate, University of Stellenbosch, Afrika Atsimo [ORCiD]
Mitantana ny sampan-draharahan'ny serivisy nomerika nomerika ao amin'ny tranomboky UCT ary nitazona asa tsy miankina maro karazana, anisan'izany ny famelabelaran-kevitra momba ny teôria sy ny kabary momba ny zavakanto ary ny fandalinana mitsikera any amin'ireo toeram-pianarana ambaratonga ambony any Western Cape, manome atrikasa amin'ny horonan-tsary, feo ary sary, famerenana fanoratana, fampirantiana ny kanto an-tsary, ary fampisehoana ho mpitsoka amponga. Niklas dia mitazona MA (FA) sy BA (Hons) avy amin'ny UCT, ary koa BA amin'ny fanabeazana avy amin'ny University of Cologne.
Mpitantana tetik'asa klinika, Hopitaly Anjerimanontolon'i Würzburg
Izy dia mpahay siansa mazoto sy manana fiteny maro manana traikefa 10 + taona amin'ny biolojika molekiola, pharmacology ary neurosciences. Izy dia namolavola fahaizana matanjaka amin'ny neurosains mialoha sy klinika iraisam-pirenena. Ho fanampin'ny asa fikarohana nataony, i Carine dia mirotsaka amin'ny fanatontosana siansa sy fananganana fahaiza-manao ara-tsiansa any Afrika. Ity fifamofoana ity dia mikasa ny hanamora ny fahafaha-mianatra sy ny famerenana amin'ny laoniny ny fahalalana sy ny fiaraha-miasa iraisam-pirenena mba hanatsarana ny kalitaon'ny fampianarana siantifika sy ny fikarohana any Afrika. "
Ivotoerana fiofanana momba ny fifandraisana - TCC Africa, Kenya
Ny faritra mahaliana an'i Kevina dia misy ny fikarohana sy ny fampandrosoana, ny haren'olombelona, ​​ny siansa momba ny angona ary ny siansa misokatra. Tanjony ny hihoatra ny fotoana ary hanolotra vahaolana izay mamorona traikefa sarobidy sy mahafinaritra ao amin'ny sehatr'asa izay mety ho miverimberina sy mahavariana.
EMEA Application consulting, Egypt
Mpanolo-tsaina mpitarika ny fanovana nomerika / mpahay siansa momba ny angona, injeniera momba ny fikarohana sy ny fampandrosoana, ny talen'ny arofenitra ho an'ny talen'ny Master Master ary ny mpitantana ny programa lean-agile.
Justin Segbédji Ahinon
Ny mpanorina ny AfricaArXiv, IGDORE, BéninORCiD]
Ny mpamorona WordPress izay manana fikaon-dàlana amin'ny antontan'isa ampiharina sy fahalianana goavana amin'ny resaka fidirana malalaka any Afrika ary koa ny fanaparitahana ny fahalalana sy ny fomba anaovana ny kaontinanta.
Oniversiten'i Mohamed V & Ivon-toerana momba ny fambolena sy fiompiana, fiankinan-doha amin'ny fiankinan-jaza, Rabat, Morocco [ORCiD]
Mpianatra PhD ao amin'ny Neuroscience
Mahmoud M Ibrahim
Uniklinik RWTH Aachen, Alemana & Egypt
Rafitra momba ny fikarohana biolojika, mampiasa fianarana milina hanamboarana modely faminaniana momba ny rafitra biolojika avy amin'ny angon-drakitra avo lenta, indrindra fa ny angona. Amin'izao fotoana izao dia miasa amin'ny fahatakarana ny aretina mitambatra ny angon-drakitra momba ny marary sy ny marary klinika. Niasa taloha tao amin'ny orinasa Biotechnology and Clinical Research.
Talen'ny Jabulani Tanora ho an'ny fanovana (JAY4T), Kenya
Ny biochemist sy ny mpandraharahan'ny siansa manana finiavana momba ny Biology Conservation ary manamora ny fandaharan'asa fiarovana amin'ny faritra.
Mpiara-manorina sy CTO amin'ny Vilsquare.org, Nizeria
Mpitantana tetik'asa sy mpikaroka amin'ny sehatra toa ny fahasalamana, fanabeazana, fananganana, ara-dalàna, asa, famokarana ary fiarovana ary fanaraha-maso.
Programme fisorohana ny homamiadana nasionaly - Nizeria, University of Ibadan - Nizeria [ORCiD]
Olabode dia tanora Nizeriana liana liana amin'ny fahitana ny Afrika nofinofinay. Mino izy fa "harena ny fahasalamana". Mba hiaina tsara dia tsy maintsy ho salama ianao. Manana mari-pahaizana MSc sy BSc amin'ny biokimia (Fikarohana momba ny homamiadana ary biolojika molecular) izy.
Manantena ny fotoana hitrandrahana ny fahaiza-miasa, fikarohana, fitarihana ary fahaizana teknika aho. ”
University of Alexandria, Ejipta
Biokimistia manohy mari-pahaizana MSc amin'ny Neuroscience sy Biotechnology miaraka amina teknika biolojika molekiola sy kolontsaina sela.
Dr. Sara El-Gebali
OpenCider Mpanorina, Alemana [ORCiD]
I Sara dia mpanorina ny OpenCider ary Mpitarika ny ekipa mpikaroka data data monina any Berlin. Niasa tamin'ny naha-mpikarakara ny angon-drakitra siantifika tao amin'ny Laboratoara Biolojika Molekular Eoropeana (EMBL) -EBI sy EMBO izy niaraka tamin'ny PhD tamin'ny fikarohana homamiadana avy amin'ny University of Bern, Suisse. Mpisolovava matanjaka ho an'ny fananganana vondrom-piarahamonina sy ny fampiroboroboana ny vehivavy sy ireo vondrona tsy misy solontenan'ny STEM izy.
West Virginia University, Etazonia [ORCiD]
Mpianatra PhD manana traikefa an-taonany maro ho mpahay siansa data. Ny fikarohana nataony dia mifantoka amin'ny toekarena ekolojia, faharetana, toekarena spatial, ary ny teorista.
Ny mpanorina ny AfricaArXiv, Fidirana hevitra 2', IGDORE, Alemana sy Kenya [ORCiD]
Mpanazatra sy mpanolo-tsaina amin'ny fitantanana tetik'asa siansa misokatra sy fifantohana siansa. Miaraka amin'ny fifantohana amin'ny fitaovana nomerika ho an'ny siansa sy ny marika ', mikendry ny fanamafisana ny fikarohana momba ny kaontinanta afrikanina amin'ny alàlan'ny Open Science izy.
Tale mpanatanteraka, Fanabeazana pivot maneran-tany Vondrona mpanadihady
Mpiandry postdoctoral ao amin'ny University of Sussex [ORCiD]
Tale mpanatanteraka, Ivontoerana fanofanana amin'ny fifandraisana (TCC-Afrika)
ORCID Engagement Lead [ORCiD]
Washington University & Open Access Nigeria
University of Oxford (UK), University of the Witwatersrand (RSA) ary IGDORE [ORCiD]
Eo ambanin'ny Microscope mpanorina